Itai ma sheetsiti nematura ekudzidzisa zvidzidzo zvepabonde
Chimiro, kukurudzirwa uye basa rehutano hwemurume nemukadzi chinhu chinokosha pakudzidzisa vana kumba uye nekudzidzisa dzidzo dzepabonde kuchikoro.
Mishandirapamwe edu (pasi pekuvaka) inogona kushandiswa zvakasununguka, kunyanya muzvikoro. Kushandura pahutano kunovhura peji ne template yakagadzirirwa.
Mutumbi wemurume nemukadzi
Kuvaka zvikadzi zvepabonde
Zvepabonde nhengo dzevakadzi
Gadzirai genitalia yemurume
Zvepabonde nhengo yevanhu
Kuvaka mazamu kubva mberi
Vakai mazamu kumativi
Maitiro uye basa remazamu
Please udza mashoko Isu kana iwe uri kutsvaga template chaiyo. Tingave takakwanisa kuumba template itsva maererano nemashoko ako.
Kudzidzira mafirimu Zvepabonde - Anatomy yeMukadzi
Kudzidzira mafirimu Zvepabonde - Anatomy Man
Kudzidzira mashizha Kuita zvepabonde - Mutumbi wevakadzi
Kudzidzira mafirimu Zvepabonde - Genitalia Woman
Kudzidzira mafirimu Zvepabonde - Zvepabonde nhengo yevanhu
Kudzidzira mafirimu Zvepabonde - Mumuviri
Kudzidzira mafirimu Zvesayenzi Nhengo dzepabonde Nhengo dzechikadzi Mukadzi
Kudzidzira mapepa emadzidzisi ekudzidzisa zvepabonde murume nemukadzi
Kudzidzira mabhizimusi Zvepabonde - Mazamu
Kudzidzira mafirimu Zvepabonde - hutano hwevanhu